Ngwa IFA kacha mma 2015 | Akụkọ akụrụngwa
Ndị a bụ 5 nke ngwaọrụ kachasị mma anyị hụrụla na IFA
La IFA si Berlin a na-aga n'ihu na Berlin, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị nrụpụta emeelarị ka ha gosipụta ngwaọrụ ọhụrụ ha. Samsung, Sony ma ọ bụ Motorola ewepụtalarị akụkọ ha maka ọnwa ndị na-abịanụ na ọ bụ ezie na ihe omume a dị mkpa agaghị akwụsị ruo na Septemba 9 na-esote, anyị nwere ike ịsị na ruo mgbe akụkọ gbasara, ihe niile emechiela.
Ya mere, taa anyị ga-eme a nyochaa ngwa kachasị mkpa anyị hụrụ ụbọchị ndị a na mmemme German. O doro anya na anyị kpebiri ịhapụ Sasmung Galaxy S6 ọhụrụ ma ọ bụ OnePlus 2 na ọ bụ ezie na e gosipụtara ha ụbọchị ole na ole tupu IFA anyị enweghị ike ịgụnye ha na ihe omume a.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata 5 nke ngwaọrụ kacha mma anyị hụrụ na IFA, nọrọ n’ihi na anyị ga-ebido nyochaa Samsung Gear S2, Xperia Z5 ma ọ bụ Moto 360 ọhụrụ ahụ, n’enweghị mgbagha ọ bụla n’ime smartwatches abụọ kachasị mma nke ga- adịghị anya na-abata na ahịa na nke ga-abụ otu n'ime kwuru smartphones na ọnwa ndị na-abịa.
3 Moto 360 na Moto 360 Egwuregwu
Otu n'ime ndị isi na-enweghị obi abụọ banyere IFA na Berlin bụ ihe ọhụrụ Samsung Gear S2, nke anyị maraworị na ịgafe na ihe omume nke ụlọ ọrụ South Korea nwere na New York na nke gosipụtara ọhụụ ọhụrụ Galaxy Note 5 na nnukwu Galaxy S6 ihu +.
Na-ewebata ihe ngosi okirikiri ma chefuo banyere akụkụ ahụ, yana ihe jọgburu onwe ya, atụmatụ nke smartwatches gara aga, Samsung emeela smartwatch mara mma na nke kachasị ike, nke ga-enye ndị ọrụ ihe niile ha chọrọ iyi na nkwojiaka ha.
Ọzọ anyị ga-enyocha ihe isi atụmatụ na nkọwa nke Samsung Gear S2 a:
- Gear S2: 42.3 × 49.8 × 11.4mm (47g)
- Gear S2 kpochapụwo: 39.9 × 43.6 × 11.4mm (42g)
Ihuenyo Ikuku SuperAMOLED na mkpebi nke 1,2 ​​× 360 na 360ppi
Dual isi 1.0 GHz processor
Tizen OS sistemụ, na-emegharị ka wearables
4GB nke nchekwa dị n'ime
Batrị 250mAh, ụbọchị 2-3 jiri, ikuku na-akwụ ụgwọ
Kọntaktị, ificationsma Ọkwa, ozi, ozi, olu, emoticons, kiiboodu, ozi ọma, map, ihu igwe, egwu na gallery
S Health, Nike + Na-agba ọsọ, Olu, Chọta ngwaọrụ m, ọnọdụ nchekwa batrị, enyemaka, mkpọchi nzuzo
IP68 ájá na mmiri na-eguzogide
Kwekọrọ n'Ozizi na gam akporo ngwaọrụ
Wi-Fi: 802.11 b / g / n, BT 4.1, NFC, accelerometer, gyroscope, ihe mmetụta obi obi, ihe mmetụta ọkụ ambient, barometer
O di nwute, a gaghị anabata ego ya maka mmefu ego niile, mana anyị na-arụ ọrụ na ngwaọrụ nwere usoro nlezianya na atụmatụ nwere ike ịbịaru nso nke ihe ngosi. Ọ bụrụ na ọ nweghị ihe iju ọ bụla mere, Ggear S2 a ga-abụ nnukwu ihe ịma aka maka Apple Watch yana kwa ezigbo ngwaọrụ maka ọtụtụ ndị ọrụ.
Fọdụ n'ime ndị ama ama ama ama ama n'ahịa ahụ kpebiri ịpụ onwe ha pụọ ​​na IFA dị na Berlin iji gosipụta ọnụ ọgụgụ ọhụrụ ha maka ọnwa ndị na-abịa. Agbanyeghị, Sony chọrọ igosipụta ọkọlọtọ ọhụrụ ya na mmemme German yana ọ bụkwa ezigbo ọkọlọtọ ọ bụghị etemeete dị mfe dịka ụlọ ọrụ Japan mere n'oge na-adịbeghị anya.
Ihuenyo ya, imewe ya ma ọ bụ igwefoto ya doro anya na ọ bụ ụfọdụ njirimara kachasị mkpa nke Z5 a, nke nwekwara yana dịka o mere n'oge ndị ọzọ, ya na nwanne ya nwoke nke Z5 Compact na nwanne ya nwoke nke okenye nke nwere ihuenyo na mkpebi 4K.
Ndị a bụ ndị isi Njirimara na nkọwapụta nke ọhụrụ Ssony Xperia Z5:
5,2-anụ ọhịa IPS Full HD ihuenyo, Triluminos
Octa isi processor Qualcomm Snapdragon 810 2,1 Ghz, 64 bit
RN nchekwa 3GB
32 GB n'ime ebe nchekwa. Gbasaa site MicroSD
2900 mAh batrị. Chargekwụ ụgwọ ngwa ngwa. Ọnọdụ STAMINA 5.0
Igwefoto isi: ihe mmetụta 23 megapixel. Autofocus 0,03 sekọnd na f / 1.8. Igwe ọkụ abụọ
Android Lollipop 5.1.1 sistemụ arụmọrụ na oyi akwa nhazi
Njikọta: WiFi, LTE, 3G, WiFi Direct, Bluetooth, GPS, NFC
Mmiri na uzuzu na-eguzogide ọgwụ (IP 68)
Moto 360 na Moto 360 Egwuregwu
El Moto 360 O doro anya na mbụ smartwatch mbụ kụrụ n'ahịa ahụ n'ihi atụmatụ ya nke yiri nke ọ bụla na-eche nche na nkọwa ya nke nyere onye ọrụ ahụ karịa ahụmịhe na-atọ ụtọ. Ugbu a Motorola achọpụtala na ọ dị mma iji megharịa otu ngwaọrụ flagship ya ma ọ gosipụtawo ya smartwatch ọhụrụ ya na nsụgharị abụọ, otu maka onye ọrụ ọ bụla na nke ọzọ maka ndị ọrụ ahụ na-achọ iji elekere ha egwu egwuregwu.
Na mgbakwunye, na mbata nke Moto 360 ọhụrụ a n'ahịa enwerekwa ohere ịhọrọ n'etiti nha dị iche iche nke smartwatch, nke mere na onye ọrụ ọ bụla nwere ike iyi ya na nkwojiaka ha n'emeghị ka ọ buru ibu ma ọ bụ obere.
Ugbu a, anyị ga-enyocha isi atụmatụ na nkọwa nke Moto 360 ọhụrụ a:
42mm | Ihuenyo, 1,37 × 360
46.5mm | Ihuenyo, 1,56 × 360
Gam akporo Wear sistemụ
Ọnụ ya, dịka ọ dị na Samsung Gear S2, adịghị oke ala ma anyị nwere ike ịzụta ya na mba ọ bụla n'ụwa maka $ 309 na $ 359. Ugbu a naanị ihe anyị kwesịrị ịma bụ ọnụ ahịa a ga-eji wepụta ya na Spain na ọtụtụ mba ndị ọzọ.
Huawei aghọọla oge otu n'ime ndị nrụpụta ngwaọrụ mkpanaka na ahịa yana n'etiti ihe ndị ọzọ kpatara ezigbo ọnụ ahịa ọ rụpụtara ma bupụta n'ahịa ahụ. Mgbe Ascend Mate 7 gasịrị, P8 ma ọ bụ P8 Lite a Huawei Mate S obu ihe ngosi ohuru nke ike na imata uzo esi eme ihe nke oma.
Tupu anyị abanye n'ụdị nkọwa ọ bụla, nke ya na onye nrụpụta China nke nọ n'etiti anaghị adịkarị mma, anyị ga-enyocha isi nkọwa nke Huawei Mate S:
Akụkụ: 149.8 x 75.3 x 7.2 mm
5,5-anụ ọhịa ihuenyo, AMOLED, 1080p, ozodimgba iko 4, 2.5D
HiSilicon Kirin 935 2,2GHz processor, Mali T628-MP4 GPU
3GB nke Ram
32GB n'ime ebe nchekwa
13MP n'azụ igwefoto, RGBW mmetụta, ngwa anya stabilizer, sọrọ okpomọkụ LEDs na ihe oyiyi processor
Igwefoto n'ihu 8MP, f / 2.4
Nhọrọ Dual-SIM 4G, NFC, redio FM
2700mAh batrị nwere ụgwọ ngwa ngwa
Mkpisiaka mmetụta na ise dị iche iche ọrụ, ala okwu
Android Lollipop 5.1.1 sistemụ arụmọrụ na Uotion UI 3.1
Ugbu a, ọ nwere ike doo anya karịa otu na anyị anaghị eche ihu ọdụ ndị China karịa narị otu narị na-abịa kwa afọ na ahịa. Nke a Huawei Mate S nwere ike ịnya isi na ihe ọ bụla na mgbakwunye na ịnwe ọnụahịa karịrị asọmpi. Ma ọ bụ na anyị Anyị nwere ike ịchọta ya na ahịa maka ọnụ ọgụgụ site na euro 649, ọnụọgụ dị ala karịa nke ekwentị ndị ọzọ yiri ya.
Iji mechie ndepụta a nke ngwa kachasị dị egwu nke anyị hụrụ na IFA na Berlin anyị hụrụ Acer Jade Primo, ngwaọrụ nke nwere ike ịdị ntakịrị ala karịa anọ ndị ọzọ anyị hụrụ, mana nke ahụ dọtara uche dị ukwuu ka ọ bụrụ ekwentị izizi nwere Windows 10 arụnyere na amaala n'ime ya na nke ahụ na-enyekwa anyị ụfọdụ nhọrọ na ọrụ pere mpe.
Otu n'ime ha bụ ohere nke ịgbanye ama a na kọmputa, n'ihi nhọrọ nke Microsoft mere aha ya na Continuum. Na nhọrọ a, anyị ga-agbakwunyekwa ihuenyo 5,5 nke anụ ọhịa na mkpebi 1080p na igwefoto megapixel 21 nke na-anaghị ekwe ka anyị chefuo na anyị na-eche ihu na ngwaọrụ mkpanaka, nke dịkwa ọtụtụ karịa.
Obi abụọ adịghị ya na anyị na-eche smartphone dị ịtụnanya ihu na anyị nwere ike ikwu na ọ malitere oge ọhụụ, oge nke onye ọrụ ọ bụla ga-enwe ike iburu ọ bụghị naanị mkpanaka ha n'akpa uwe ha kamakwa kọmputa nke ha, nke ha nwere ike jiri dị ka ndị dị otú ahụ n'ebe ọ bụla ekele maka nhọrọ nke Windows 10 ọhụrụ.
N'oge a amaghị ama mgbe ọ nwere ike ịdakwasị ahịa ahụ n'agbanyeghị na ihe niile na-egosi na ọ ga-abụ ụbọchị ole na ole na-esote ma ọ bụ izu, yana ọnụahịa nke dị mwute na anyị amabeghị.
Anyị maara na e nweela ọtụtụ ngwa ndị ọzọ ewepụtara na IFA, mana ise ndị a bụ ọkachasị anyị. Ọ bụrụ na ịkeghị echiche anyị, echegbula n'ihi na ọ nwere ike bụrụ ihe zuru oke, na mgbakwunye na nke a anyị enyerela ohere ahụ maka nkọwa, nke ị nwere ike ịgwa anyị nke bụ ngwa kachasị mkpa anyị nwere ike , na anyị ka nwere ike ịhụ n'oge IFA a na-eme na Berlin.
Kedu ihe ị chere bụ ngwaọrụ kachasị mma a hụrụ na IFA 2015?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ndị a bụ 5 nke ngwaọrụ kachasị mma anyị hụrụla na IFA
Ọ bụrụ na nke a bụ nke kachasị mma, echere m na ọ bụ afọ na-esighi ike.
Ndị a bụ isi akwụkwọ akụkọ ọhụrụ gam akporo 6.0 Marshmallow